विप्लवले सोधे- क्यान्टोनमेन्टको १९ अर्ब रुपैयाँ खै? « Bagmati Online
विप्लवले सोधे- क्यान्टोनमेन्टको १९ अर्ब रुपैयाँ खै?
काठमाडौँ – महासचिव नेत्रबिक्रम चन्द्र विप्लवले माओवादी जनमुक्ति सेनाको क्यान्टोनमेन्टमा १९ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको प्रसंग फेरि झिकेका छन्। सोमबार आफू नेतृत्व नेकपा निकट अनेमसंघ क्रान्तिकारीको सातौँ महाधिवेशनलाई सम्बोधनका क्रममा उनले आफ्नो संघर्ष भ्रष्टाचारविरुद्ध भएको उल्लेख गर्दै जनमुक्ति सेनाको शिविरमा पनि ठूलो रकम भ्रष्टाचार भएको बताएका हुन्।
तत्कालीन माओवादीका नेता समेत रहेका चन्दले २० हजार जनमुक्ति सेनाबाट प्रत्येक महिना पाँच हजार रुपैयाँका दरले क्रान्तिका लागि भनेर उठाइए पनि त्यसको हिसाबकिताब स्पष्ट नभएको उल्लेख गरे। विप्लवले भने, ‘जनमुक्ति सेनाको पैसामा भ्रष्टाचार भएको छ। २० हजार जनाको हिनामिना भयो। हिजो एक जनाको पाँच हजार काटेर १९ अर्ब खायो भनेर अहिले पनि बाहिर चर्चा छ।’
उनले आफ्नो पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्ध संघर्ष गर्दा प्रतिबन्ध लाग्दा पनि संघर्ष जारी राखेको दाबी गरे। चन्दले भने, ‘हामीमाथि प्रतिबन्ध लागेपछि गाउँमा गयौँ, रुखका बुटामा सुत्यौँ। भ्रष्टाचारका विरुद्ध संघर्ष गरौँ। अहिले हामी त्यही एजेण्डा बोकर शहर फर्कियौँ।’ उनले आफूहरु पूर्वप्रतिबद्धताबाट पछाडि नफर्किने बताए। ‘हामी त्यस्तै हुँदैनौँ। दश वर्षे लडाईंको प्रतिबद्धता, किसान मारिएको, सहिदका सपना पूरा गर्नुपर्छ, प्रतिबद्धता भुल्दैनौ,’ चन्दले भने।